Komaandi poostiin labsii yeroo muddamaa akeekkachiise - BBC News Afaan Oromoo
Labsiin yeroo muddamaa baatii jahaaf biyyatti gutuutti hojiirra ni akka olu himamee erga guyyoota 10 dura labsameen booda, komaandi poostiin hojiirra olmaa labsichaa ni hordofa jedhame, ibsa har'a baaseen humnota seeraan ala socha'u jedhurraatti tarkaanfii cimaa akka fudhatu akeekkachise.
Sakretaraatiin komaandi poostii labsii yeroo muddamaa kun ibsa isaatiin, humnoota nageenyaafi tasgabbii boreessan akkasumas kanneen miseensoota mana maree bakka bu'oota uummataa sodaachisan irratti tarkaanfii akka fudhatu akeekkachiseera.
''Labsiin yeroo muddamaa erga baheen asi sochii humnotiin nageenyaa taasisanii fi hirmaannaa uummataatiin yeroo gabaabaa keessatti naannoolee biyyattii hundatti haalli nagaafi tasgabbiin uumuun danda'ameera,'' jedheeras.
Haa ta'u malee, ''magaaloota Dambi Dolloofi Naqamteetti humnoonti seeramaleesoonni nageenyaafi tasgabbii boreessuuf yaali taasisuun alattis, humnoota nageenyaarratti boombii harkaa darbachuun balaa qaqabsiisuuf sochii taasisaniiru,'' jechuun rakkoolee mudataniiru jedhe eereera.
Sochii humnootiin nageenyaa tasgabbii mirkanneessuuf taasisaniin, haala danda'ameen lubbuun namootaa akka hindabarreef ofeeggannoo barbaachisu akka taasisaniif qajeelfamni kennamufiisaa kan caqase ibsichi, ''haa ta'u malee humnooti kunneen gocha badiinsaa isaanii irraa kan ofi hinittifne yoo ta'e tarkaanfii barbaachisaa akka fudhataniif humnoota nageenyaatiif qajeelfamni keennamera,'' jedheera.
Kana malees dorsifni haala garaa garaatiin miseensoota bakka bu'oota ummataa naannoo irraa gahaa jiraachuu iyyannoon irra deebiin dhiyaachusaa kan eere ibsichi, gochi kunis kan akka laayyootti hinfudhatamneefi hordoffii taasisuun tarkaanfii seeraa kan fudhatu ta'u akkeekachiseera.
Labsiin yeroo muddamaa ala lammaffaaf erga labsamee torban lamaaf qabatulleen hanga ammaatti mana maree bakka bu'oota biyyattiin murtee hinargatiin jira.
Manni maree boqonnaarratti argamuus Jimaata dhufaa walgahii yeroo ariifach iisaatiif kan waamame yoo ta'u, walgahiichaanis labsii kanarratti murtee ni dabarsa jedhamee eegamaa jira.
Haa ta'u malee guuyyoota darba 10 keeessattis taateewwan mormii garaa garaa naannoolee biyyatti adda addaa irraa dhagahamaniiru.